Portable Long Magnetic Sticky Paper Paper Roll China Manufacturer
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Business Type:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:11% - 20% Certs:ISO9001, RoHS, Test Report Description:Hazo fotsy hoditra,Hazo fotsy,Long Sticky Tables
Home > Products > Whiteboards Receptive Whiteboards > Fampitaovana mivadika ho fotsy > Portable Long Magnetic Sticky Paper Paper Roll
Ny vokatra Item No.BCKP-NS50-PSA, portable ela andriamby dity solaitrabe taratasy horonan-taratasy, dia karazana adhesive whiteboard malefaka, mora tapaka, kofehy, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. EN71 Ary mifanaraka amin'ny ROHS, tsy manana kiraro mafy na maranitra mafy izy ary tsy mahatonga ny fery na ratra ary azo antoka ny mitantana. Noho ny adhesive mato-tsolotsain'ny sela fantsika, ny solaitrabe sarimihetsika mora ny mametraka ary tsy hianjera mora foana . Amin'ny maha-tavoahangy azy, dia manana fanoratana tsara sy manala ny faharetany izy, mifanaraka amin'ny karazana penina, ny marika dia mety ho maina ao anatin'ny iray volana. Toy ny andriamby mora mandray Whiteboard Sheet atao amin'ny fampifangaroana vy vovoka amin'ny plastika (CPE sns), dia manana fahafahana tsara andriamby vonon-kandray, attachable avoakan'ireo andriamby.
Toeram-panamboaran-trano Wall Wall Decoration Whiteboard
Drafitra fanontam-pirinty skoto fanala mibaribary
Fitaovana entina amidy amidy ho an'ny biraon'ny ankizy
Hazo fotsy hoditra
Long Sticky Tables
Hazo fotsy maitso
Birao fotsy birao
Birao fotsy hanoratanao
Birao fotsy fotsy
Hazo fotsy hoditra Hazo fotsy Long Sticky Tables Hazo fotsy maitso Hazo fotsy Whiteeboebo Birao fotsy birao Birao fotsy hanoratanao Birao fotsy fotsy